ISyunivesithi yaseSyrause - iHolo yeeLwimi Iinyathelo
IHolo yeeLwimi kwiIyunivesithi yeSyracuse (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Eliza Kinnealy
ISyunivesithi yaseSyrause, eyaziwa ngokuba yiCuse okanye i-SU, yiyunivesithi yophando lwangasese e-Syracuse, eNew York. Eyasungulwa ngowe-1870, i-Syracuse njengamanje inebafundi abangama-21,000 ababhalise, kunye nama-14,000 abafundele izifundo zakudala. Umbala wesikolo wakhe unobumba kwaye i-mascot yayo ibizwa ngokuba nguOtto wase-Orange.
IYunivesithi ihlukaniswe kwizikolo ezilishumi elinantathu zemfundo / iikholeji: ISikole soBugcisa, iKholeji yoBugcisa kunye neSayensi, iSikole seMfundo, uDavid B. Falk iKholeji yeMidlalo kunye neZakhono zoLuntu, iSikole soMthetho, iSikolo saseMaxwell Ubunini kunye neMicimbi Yoluntu, i-SI, isikolo seNewhouse School soNxibelelwano lukaRhulumente, uLC Smith College of Engineering kunye neNzululwazi yeeKhompyutha, iKholeji yaseYunivesithi, iKholeji yoBuchule kunye noBugcisa bobuGcisa, uMaspala J..
I-Syracuse ilungu leNgqungquthela yaseBig East yonke iCandelo le-NCAA I-athletics kwaye iya kujoyina iNkomfa ye - Atlantic Coast kwiJuni 1, 2013.
Amanye ama-alumni adumile aseSyrafu abandakanya uDick Clark, uJoe Biden, uJim Brown, uVanessa Williams, u-Ernie Davis kunye noBetsey Johnson.
I-Snowy Campus - Yunivesithi yaseSyrause
I-Snow Quad eSyunivesithi yaseSyrause (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: uLily Ramirez
Ngendawo yayo enkabeni yeNew York, amava aseSyrafu malunga neekhilomitha ezili-100 zeqhwabalala ngonyaka. Abafundi abaninzi babhekisela eSirakuse njengemimoya ye "bipolar" njengelinye ilanga kunokutshiswa ngelilanga elilandelayo likhephu. Ubusika obubandayo eSirakusa banike abafundi ithuba lokuba bathathe inxaxheba kwi-skiing, snowboarding, kunye ne-sledding.
IHolo yeeLwimi kwiYunivesithi yaseSyrause
IHolo yeeLwimi kwiYunivesithi yaseSyrause (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
IHolo yeeLwimi yayisakhiwo sokuqala esakhiwe kwi-campus yase-Syracuse Yunivesithi ngo-1871. Esi sakhiwo sobuqhetseba sibalwe kwiRejista kaZwelonke yeNgingqi.
Eyilwe nguHoratio uNelson White, iHolo yeeLwimi yenziwe nge-Onondaga limestone kwaye ekuqaleni yayihlala kuyo yonke iyunivesithi. Isakhiwo sakhiwe ngo-1979.
IHolo yeeLwimi yayiyikhaya leKholeji yoBugcisa boBugcisa nangona amanye amasebe kubandakanya uMgcini-zincwadi kunye neChansela bahlala kwisakhiwo.
Abafundi abaninzi baseSyrafusa babhekisela kwiHolo yeeLwimi njengokwakha "i-Addams Family" ngenxa yokufana kwayo nekhaya leentsapho eziyinyani.
Crouse College of Fine Arts eSyunivesithi yaseSyrause
Crouse College of Fine Arts kwiYunivesithi yeSyrause (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Eliza Kinnealy
Ngokuqhelekileyo okubizwa ngokuba yi "Hogwarts" ngabafundi, iKholeji yeCrouse Arts Fine, okanye iKholeji yaseCrouse, yayingenye yezakhiwo zokuqala ezakhiwe kwi-campus yase-Syracuse University. Eyakhelwe ngo-1888 ngu-Archimedes Russell, iKholeji yaseCrouse yaqanjwa ngamagama ebhanki owaziwayo kunye no-John Crouse.
I-brownstone, isakhiwo sesitayela esiqhelekileyo siquka intsimbi yebell apho iqela labafundi lithatha izilwanyana kunye neengoma ezihlukahlukeneyo ngalo lonke usuku. Ikhaya kwiklasi yezobuGcisa bobuGcisa kunye nezobuGcisa kwaye yafakwa kwiRejista kaZwelonke yeNgingqi e-1974.
USmith Hall kwiYunivesithi yeSyracuse
Smith Hall eSyunivesithi yaseSyrause (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
Eyakhelwe ngo-1900, uSolomon Hall wakhiwa nguGaggin waza wabizwa nguLyman C. Smith, onguvulindlela wokunyathelisa. Isakhiwo sesi sandstone sase-Ohio, esivela kwiYunivesithi, yindlu ye-LC Smith College ye-Applied Science eyinika idigri kumashishini ombuso, ugesi kunye nobunjineli.
IHolo leBowne eSyunivesithi yaseSyrause
IHolo leBowne eSyunivesithi yaseSyrause (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
IHolo leBowne leKhemistry lakhiwa ngo-1909 nguNjingalwazi uFrederick W. Revels kwaye wabizwa emva kukaSamuel W. Bowne, umnikelo kwisakhiwo sokwakha. Esi sakhiwo senzelwe okokuqala kwiSebe leKhemistry. IHolo leBowne lahlaziywa ngo-1989 kwaye ngowama-2010 waza waba yindlu ye-Syracuse Biomaterials Institute.
I-Carnegie Library kwiYunivesithi yeSyracuse
I-Carnegie Library kwiSyunivesithi yeSyrause (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: uLily Ramirez
Kutholakala kwicala lasezantsi leQead, iThala leCarnegie yakhiwa ngo-1907 ngabaProfesa uFrederick W. Revels no-Earl Hallenbeck. Ngokuvulwa kweLibrari yeLibrari ngowe-1972, uCarnegie walungiswa kwiindawo zokuqokelela ebomini nasezinzimbeni, ubunjineli, ezempilo, izifundo zethala leencwadi, iifoto, imathematika, iingubo kunye neengcweti zesayensi.
I-Carnegie inikeza indawo yokufunda, ukufikelela ngaphandle kwentambo, kunye neekhomputha zekhompyutha kunye nokushicilela nokukhangela abafundi kunye nabasebenzi.
ULyman Hall weMbali yeNdalo eSyunivesithi yaseSyrause
ULyman Hall eSyunivesithi yeSyrause (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
Eyakhiwa ngo-1905, uLyman Hall weMbali yeNdalo yayisemakhaya kwiSebe leBiology, iBotany, Geology, i-Zoology, Psychology kunye neJografi. Isakhiwo sesitayela sokuvuselela igama saqanjwa ngeentombi ezilahlekileyo zikaJohn Lyman, uMary noJessie.
Isakhiwo se-marble ne-Indian limestone sabanjwa ngomlilo ngo-1937, sitshabalalisa umgangatho ophezulu, uphahla kunye neengqokelela zemyuziyam. Ngethamsanqa, iLyman Hall yabuyiselwa kamva ngaloo nyaka.
IHendricks Chapel eSyunivesithi yaseSyrause
I-Hendricks Chapel eSyunivesithi yaseSyrause (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
I-Hendricks Chapel iphakathi kwenkampu yaseSyrafu, i-perpendicular kwi-Quad. Eyakhelwe ngo-1930, i-Hendricks yayiyintsika yesithathu ephakamileyo kwiYunivesithi kweli lizwe ngexesha lokwakha kwayo kwaye ihlala nabantu abayi-1,450. Abaqulunqi bezakhiwo babe nguJames Russell Pope noDwight James Baum abavela kwiKlasi ka-1909. UFrancis Hendricks, i-senator yesizwe kunye ne-SU trustee, wanikela ngethempeli lihlonipha umfazi wakhe osemva. I-Georgia ne-trickone kunye nesitena isebenza zonke iinkolo. Ipulpiti yayiyisipho esivela kwiKlasi ka-1918 ngelixa ilungu le-Aeolian laliyisipho sikaNksz Francis Hendricks, umshana kaKatherine, kodwa watshintshwa ngo-1952.
I-Hendricks Chapel ibamba iindidi ezahlukahlukeneyo, izithethi kunye nemisebenzi yonqulo kulo nyaka.
UMaxwell Hall eSyunivesithi yaseSyrause
UMaxwell Hall eSyunivesithi yaseSyrase (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
UMaxwell Hall woLuntu kunye neMicimbi Yoluntu yakhiwa ngo-1937 nguJames Dwight Baum noJohn Russell Pope. UGeorge Holmes uWilliwell, uSU alumnus kunye nelungu leBhodi yeTrasti, wayeyimpumelelo yegosa lika-Boston lommeli, umxhasi, umqambi, kunye nomenzi wesikhwele oye waxhaswa ngesakhiwo sezitena sase-Georgian Colrickal.
I-Eggers Hall, eyakhiwe ngo-1993, idibana noMaxwell Hall kunye ne-atrium kawonkewonke.
I-Bird Library kwiYunivesithi yeSyrause
Inqanawa yeLibrari kwiYunivesithi yeSyracuse (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
I-Bird Library, ebizwa ngokuba ngu-trustee u-Ernest S. Bird, yakhiwe ngo-1972 nguKumkani no-King Associates. Ngaphambi kokuba kwakhiwe i-Bird, i-Carnegie Library yayisithuba sokufunda esikolweni kubafundi. Ngesixhenxe esezantsi, ii-lab lab e-computer, kunye neefestile, iLibrari yeLayibrari yindawo ekuya kuyo ukuba umfundi ufuna ixesha elithile lokuthula ukuze afunde. Abafundi banokuqeshisa okanye bahlole ii-laptops kunye nezinye izixhobo apha.
Efumaneka kumgangatho wokuqala, iCape Café ibonisa inkululeko ye-Expresso. I-coffee shop inikezela ngeentlobo zeentlwana, i-gourmet wraps, izinto zokutya kwasekuseni kunye neefatries.
Link Hall kwiYunivesithi yaseSyrause
Ikhonkco eHolo eSyunivesithi yaseSyrase (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
Eyakhelwe ngo-1970, iNgqungquthela yoBungqina be-Link Hall yabizwa ngo-Edward Albert Link, umsunguli we-Link Aviation kunye nomqambi we-Link Coach Trainer owayesebenzisa ukuqeqeshelwa abaqhubi bezemidlalo kunye nabaqhubi bezoshishino. Efumaneka kwiQuad ecaleni kweSlocum Hall, i-Link Hall inamanqanaba ayisithupha kwaye iyindlu kwikholeji yobunjineli.
Isikolo soNxibelelwano lukaRhulumente kwiYunivesithi yaseSyrause
Izakhiwo zeNewhouse kwiYunivesithi yeSyracuse (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
Izakhiwo zeNewhouse zinikezelwe kwifilimu yokusasazwa, ithelevishini kunye nomsakazo. Ngama-studio ayo amabini, i-theater ye-100, kunye ne-laboratory yeendaba, ukusasazwa ngabafundi ukufumana amava okwenene ngokwenkqubo yokusasaza, i-redio kunye ne-TV.
ISikolo esitsha seSizwe soNxibelelwano loluntu yinkqubo ekhethekileyo, ekwahlulelwa njengenye yezona zikolo eziphezulu zeendaba.
Ernie Davis Hall eSyunivesithi yaseSyrause
Ernie Davis Hall kwiYunivesithi yaseSyrause (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
U-Ernie Davis Hall yiyure yokuqala yokuhlala "eluhlaza" yaseSiraku. Izixhobo ziquka izixhobo zokusetyenziswa kwamanzi aphantsi, inkqubo yolawulo lwamanzi esiphepho, izixhobo eziphambili ezifuna amandla angancinci ukupholisa, kunye neendawo zokudlela ezifanelekileyo ukunciphisa inkunkuma yokutya kunye nokusetyenziswa kwamanzi ashushu.
U-Ernie Davis unamakhaya angama-250 abafundi kunye nabacebisi abalishumi abahlali. Iholo leendawo yokuhlala libonelela abafundi abanehholo lokudlela, indawo yokuzivocavoca, kunye neendawo zokungcebeleka kunye neendawo zokuhlamba kumgangatho ngamnye. Isakhiwo saqanjwa emva kweenkwenkwezi zebhola ekhatywayo ye-1962 kunye nomdlali wokuqala wokuqala wase-Afrika ukuba anikwe iHeisman Trophy.
I-Carrier Dome eSyunivesithi yaseSyrause
I-Carrier Dome eSyunivesithi yaseSyrause (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Jennifer Cooper
Kwavulwa ngo-1980, isihlalo esingu-49,262 isiKharityhulam iDome, esaziwa ngokuba yi "Loud House," sineengxaki ezahlukahlukeneyo kubandakanya i-SU yebhola, ibhaskball, i-lacrosse, umkhondo kunye nenkundla, ibhola lebhola, i-hockey yegadi; iziganeko zezemidlalo eziphakamileyo kunye nezikolo eziphakamileyo; Ukuqaliswa kweYunivesithi, amakhonsathi kunye nezinye iindibano zezemfundo kunye noluntu. Ngethuba lokufakela kwalo, i-Carrier Dome yayisetyenziswe njengesiqalo se-5 esona sikhulu kunazo zonke e-US kunye neyokuqala kumntla-mpuma.
Amanqaku afana ne-Syracuse University:
Iprojekthi yeYunivesithi yeSyracuse
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph kwi-Adracuse Admissions
INgqungquthela yaseBig East
Amalungu e-Phi Beta eKappa
Yintoni uMfundi weKhomishana?
Izindlela ezahlukeneyo zokutyelela iklasi yeKholeji
ISikolo soShishino - iiNdidi zeeShishini zeShishini
Iindlela ezili-10 zokwenza imfundo echaphazelekayo
Ngaba Abagwebi Bayabuza Imibuzo Ngeengxaki?
4 Iindlebe zezilwanyana Zinalo abantu abazenzayo
Ziziphi i-Elements Elements?
Indlela yokuSombulula iNgxaki yakho ye "Stuff"
Ukuguquka kwePositivism kwiSifundo soLuntu
Abazimeleyo kunye namaPirati: I-Admiral Sir Henry Morgan
Isakhiwo seNyukliya kunye ne-Isotopes Imibuzo yokuVavanya
Umbonisi Ion Inkcazo kunye nemizekelo
Nicki Minaj Igalari yezithombe